रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कारको अाराेप पूर्णरुपमा झुट ! – Everest Dainik – News from Nepal
रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कारको अाराेप पूर्णरुपमा झुट !
एजेन्सी । यो वर्ष नै इटालियन क्लक युभेन्टस गएका पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कार आरोपमा पेश गरिएका प्रमाणहरु झुटो भएको उनका वकिलले बताएका छन्।
३४ वर्षे काथरीनले लस भेगसको पुलिसमा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै प्रमाणसहित रिपोर्ट फाइल गरेकी थिइन्। २०१० मा काथरीनलाई यो घटना लुकाउन पुलिसको संलग्नतामा तीन लाख ७५ हजार अमेरीकी डलर दिएको बताइएको छ। तर, रोनाल्डोका वकिलले यो सम्झौता भएको भए पनि बलात्कारका कारण भने नभएको बताएका छन्।